Tsy nieren-doza ny Paska 2013 : olona fito no maty, 400 mahery naiditra hopitaly #Madagascar | ONG Lalana Blog
Tsy nieren-doza ny Paska 2013 : olona fito no maty, 400 mahery naiditra hopitaly #Madagascar
Publié le 2 avril 2013 par Lalana
Tsy tratra ny tanjona amin’ilay hoe : « Paska ieren-doza ». Araka ny antontan’isa voaray avy eny amin’ny hopitaly, fito no maty ary maherin’ny 400 ireo naratra naiditra hopitaly, nandritra ny fetin’ny Paska 2013 teo. Vokatry ny adiady sy ny fisotrosotroana ary ny lozam-pifamoivoizana no tena nahatonga ireo, araka ny fanadihadiana natao.
“Paska namoa-doza”! Fito no indray maty nandritra ny fetin’ny Paska sy ny alatsinain’ny Paska. Miisa 400 mahery kosa ireo nandalo fizahana teny amin’ny hopitaly ka ny 100 mahery amin’ireo no voatery tsy maintsy naiditra hopitaly, raha ny tatitra voaray, omaly hariva teny amin’ny hopitaly Hjra sampana hery vonjy taitra. Saika ireo vokatry ny adiady sy ny lozam-piarakodia no maro tamin’izy ireo. Olona efa maty tany ivelany, tonga teny amin’ny hopitaly ny efatra amin’ireo namoy ny ainy ireo. Ny iray zazakely maty an-drano teny Vontovorona, omaly tolakandro tamin’ny 3 ora sy 30 mn. Ny faharoa, ilay tovolahy nitondra môtô Scooter nifandona tamin’ny fiara teny By- Pass Ankadindratombo, ny alahady maraina tamin’ny 10 mn. Maty tsy tra-drano araka ny ahitantsika azy eo amin’ny sary ity tovolahy ity. Ary farany raim-pianakaviana iray matin’ny herinaratra teny Ambaniandrefana Isoavina, ny alahady maraina tamin’ny 2 ora. Mpiompy kisoa ny asany ary manana kisoa miisa 12 izy. Manjaka tanteraka anefa ny halatra kisoa tao anatin’ny telo misesy teny an-toerana. Vokany, nasiany herinaratra ny tranony. Nisy nangalatra anefa tao aminy. Niolomay nanenjika ilay mpangalatra izy ka niraikitra teo amin’ilay faritra misy herinaratra izay hadinony ny nanapaka azy noho ny hamehany. “Niakatra ny isan’ireo olona niditra hopitaly tamin’ity taona ity, raha miohatra ny tamin’ny herintaona. Nampitomboina toy izany koa ny isan’ireo dokotera mpiandry raharaha. Efa misy rahateo ihany koa ireo ekipa efa vonona avy hatrany handray ireo marary”, hoy ny fanazavan’ny Dr Rakotoarison Nicole ao amin’ny Hjra. Ho an’ny sampana misahana ny famelomana aina indray dia saika ireo olona niharan’ny fanapoizanana ara-tsakafo sy ireo tovovavy mikasa hamono tena no betsaka tamin’ireo naiditra tao. Nisy ihany koa ireo torana tsy nahatsiaro tena vokatry ny fisotroana toaka diso tafahoatra. “Aorian’ny fety vao azo heverina fa hitombo ny isan’ireo olona hiditra eto amin’ny sampana misy anay”, hoy ny Dr Andrianarijaona Liva.
Raha ny hita nandritra ny fetin’ny Paka sy ny omaly tontolo andro, gaboraraka tanteraka ny fisotroana toaka diso tafahoatra teny amin’izay toerana azo nisotroana. Rehefa mba mamomamo dia miseho azy ho matanjaka sy manakorontana, hany ka miafara amin’ny totohondry izany. Niezaka nanao izay ho afany ihany ny mpitandro filaminana nandamina, saingy misy ihany ireo maningana. Fety rahateo ny andro. Manao izay danin’ny kibony amin’ny famalifaliana ny ankohonana. Zara aza misy fotoana hahafahana miala vonkina amin’ity fiainana efa mampikaikaika ny valalabemandry ity, manginy fotsiny ny krizy lavareny tsy ahitam-bahaolana mazava.